Magaaladii ay Jannada (Paradise) u bixiyeen ee isu bedashay Naar! Sawiro • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Magaaladii ay Jannada (Paradise) u bixiyeen ee isu bedashay Naar! Sawiro
Magaaladii ay Jannada (Paradise) u bixiyeen ee isu bedashay Naar! Sawiro
November 11, 2018 - By: HORSEED STAFF
Ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhimatay dab xoogan oo maalmihii lasoo dhaafay qabsaday qeybo kamid ah gobalka California ee dalka Maraykanka.
Dabkan oo aan weli la aqoon waxa dhaliyey ayaa gebi ahaan burburiyey magaalada Paradise, waxaana la sheegay in guryaha dabka burburiyey ay gaarayaan 6,700.
Waxaa dab kale oo labaad oo isaga ka kacay isla gobalkaasi nawaaxiga magaalada Malibu ayaa isaguna khasaare kale geystay waxaana la sheegay in dabkaasi labaad uu burburiyey dhul cabirkiisu yahay 28.000-acres, deegaankaasi ayey isaga qaxeen dad ka badan 250-kun oo qof.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo isagu hada safar ku jooga dalka France ayaa ku eedeeyey dabkan Ismaamulka California oo u badan xisbiga kasoo horjeeda, isagoo sheegay in maamulkaasi si khaldan u maareeyey ka hortaga dabka, isagoo ku hanjabay inuu lacagta Federaalka ka goosan doono maamulkaasi, hadalkaasi oo ay si weyn ulla yaabeen shacabka Maraykanka.
Governorka cusub ee California, Gavin Newsom ayaa Sabtidii shalay xaalad deg deg ah kusoo rogay degmooyinka Los Angeles, Butte iyo Ventura oo uu dabka khatar ku hayo.
Faahfaahin: Dhimasho iyo dhaawac Ka Dhashay Qaraxii Ka Dhacay Muqdisho
DEG-DEG; Qarax Ka Dhacay Muqdisho